Ciidamada PSF oo sheegay in 41 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada PSF oo sheegay in 41 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadow
June 2, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada PSF oo ku sugan deegaanada Buuraleyda ah. [Sawirka: Facebook/psf]
Garoowe-(Puntland Mirror) 41 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Buuraha Caalmadow, Ciidamada Amaanka Puntland ayaa bayaan ku sheegay maanta oo Sabti ah.
“Ciidamada Amaanka Puntland ee PSF ayaa howgal ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay deegaanka Maraje ee Buuraha Caalmadow si looga jawaabo weerarkii xalay lagu qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada PMPF ee Puntland,” sidaa ayaa PSF ku tiri bayaanka.
“41 dagaalyahan oo katirsan argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu dilay inta uu socday howlgalkii maanta oo sabti ah,” ayaa bayaanka lagu sii yiri.
Sabtidii, ugu yaraan shan katirsan ciidamada Puntland ayaa geeriyootay kadib markii maleeshiyaad Al-Shabaab ah ay weerareen saldhig ciidan oo kuyaala deegaanka Bali-Khadar ee Buuraha Galgala, ilo-wareedyo ciidamada katirsan ayaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
April 29, 2018 Beyle: Waxaanu u baahanahay $41 milyan si loo daabaco lacag cusub oo shillin Soomaali ah
March 19, 2018 Dooni ganacsi oo dab ku qabsaday meel u dhow dekada Boosaaso
Garowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab qorsheynaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigyada ciidamada Puntland ee buuraha Galgala. “Ciidanka PSF waxay hawlgalkan ku bartilmaameedsadeen [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqen uu Mareykanku ka geystay gudaha Soomaaliya, sida ay bayaan ku sheegeen milatariga Mareykanka ee Afrika maanta oo Khamiis ah. Duqeynta ayaa ka dhacday tuulada [...]